Abavelisi beebhulukhwe - iTshayina leBriefcase Factory, abaXhasi
Ingxowa ye-Crossbody Bag T-S8136
Ishishini Ubhaka T-B3983
I-T-L5191 yebhegi yomnqamlezo
Ibhegi ye-Crossboy T-S8113
Ibhegi emfutshane TGN1005
I-Tigernu yeklasikhi yoyilo yesikhwama- I-TIGERNU iminyaka engama-30 yokugujwa kwesikhwama seduffel
Le modeli ayisiyi-handbag kuphela kodwa ikwayi-duffel bag. Ubungakanani bayo yi-46 * 16 * 32cm, umthamo omkhulu kunye nomgangatho ophezulu. Yenziwe ngenayiloni yokuxinana okuphezulu, ehonjiswe ngesikhumba sangaphandle sangaphandle.
Ingxowa inecandelo elinye eliphambili elineepokotho ezincinci kunye nokwahlulahlula ngaphakathi, kunceda ukugcina izinto zakho zilungelelaniswe kakuhle.
Umqheba wenziwe ngofele, uthambe kakhulu kwaye ukhululekile ukuwuthwala.Kwanobunzima obulula.
Le bhegi ilungile kubomi bakho bemihla ngemihla, ukuhamba okufutshane, ukuhamba intaba kunye nohambo lweshishini, iqabane elilungileyo ebomini bakho.
Ibhegi emfutshane T-L5150
TIGERNU iindlela ezintathu zokusebenzisa ibhegi yelaptop eguqulwayo
Ingxowa yeelaptop eguqulwayo enesiphatho esinyanzelisiweyo kunye nomtya wegxalaba ivumela ukuba isetyenziswe njengebhegi, ibhegi yegxalaba okanye ingxowa yomthunywa
Umthamo: Ubungakanani bengxowa yi-32 * 27 * 11cm (L * W * H), enendawo yokufaka ilaptop ilingana ne-13.1-laptop. Iineepokotho ezininzi kunye neepokotho ezinemingxunya ngaphakathi, gcina izinto zakho zemihla ngemihla zilungelelaniswe kakuhle.Le ngxowa inokuvulwa ngedigri engama-90 ngemitya emibini ecaleni ukuyigcina ime nkqo ukuze usebenzise ilaptop yakho naphi na.
Umgangatho: Ingxowa yenziwe nge-splashproof kunye ne-oxford enganyangekiyo, ehlala ixesha elide, echasene nokukrazula kunye ne-eco-friendly.I-zipper yegumbi eliphambili ziindlela ezimbini ezivulekileyo, ezenziwe ngokobunjani obuphezulu kwaye zilula kakhulu ukuvula nokuvala, ukuhlala ixesha elide kunye nokudubula -ngakhuselekanga.
Umtya wempahla ngasemva ikuvumela ukuba ubeke ibhegi kwityesi yakho ngokulula ngexesha lokuhamba kwakho.
Yibhegi yelaptop eyenzelwe kakuhle, ifashoni kwaye iluncedo kuyo nayiphi na injongo, ukuhamba, ishishini, isikolo, umsebenzi, ubomi bemihla ngemihla.
Ibhegi emfutshane T-L5188
Uyilo olucwangcisiweyo lwe-TIGERNU
Uyilo lwebhulukhwe yoBusika ka-2020 evela kuTigernu, elula kodwa yefashoni kunye neyala maxesha
Isixhobo: Yenziwe nge-nylon yokutshiza kunye nokukrwela i-polyester eyi-210D njengombala, yomelele kakhulu kwaye inobuhlobo bendawo. Iiziphu zikumgangatho ophezulu kunye nobungqina bokuqhushumba, zinokuziphu kunye ne-unzipper ngokulula. Zonke iibhakethi kunye nezixhobo zenzelwe i-logo yeTIGERNU, umgangatho ophezulu kunye nokomelela.
Ubukhulu: 43 * 16 * 31cm (L * W * H) .I-15.6inch egumbini elinelaptop eneepokotho ezincinci ezininzi ze-iPad yakho, amakhadi oshishino, iipeni, amaphepha kunye neefayile. Igumbi elinye eliphambili linemisebenzi eyahlukeneyo. Iziqwenga ezi-3 ezihlukanisiweyo ezinokususwa zinokuphinda zilungelelaniswe kwaye zibonelele ngokhuseleko oluthile lwezixhobo zekhamera. Ngaphakathi kukho ipokotho enemingxunya evaliweyo yezixhobo zokusebenza, i-iPad kunye nezinye iipilisi njl.njl. Inokuguqulwa ngokulula ibe sisikhwama esihamba ngokulula esilula ngokususa isahluli segumbi lekhamera. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kuhambo oluncinci lweentsuku, kukho indawo eyaneleyo yezixhobo zakho. Ngokucacileyo umbala omnyama uluncedo ngakumbi ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla.
Uphawu: Izinto ezingenaqhekeza zikhusela izinto zakho ekubeni zimanzi emvuleni.Zimbini iindlela zokusebenzisa njengokuhambisa ngesandla isikhwama kunye nebhegi yomthunywa ongatshatanga. Ukususa kunye nokuhlengahlengisa umtya wegxalaba. Umthamo omkhulu weemfuno zakho zemihla ngemihla.
Khetha ibhegi kaTigernu, wonwabele umsebenzi kunye nokuhamba